Toetr’andro: hiditra ao Melaky ilay andro ratsy | NewsMada
Toetr’andro: hiditra ao Melaky ilay andro ratsy
Vinavinaina hiditra any amin’ny faritra Melaky ilay andian-drahona izay arahi-maso, araka ny vinavinan’ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby. Ambany dia ambany anefa ny fepetra amin’ny mety ho fivadihany ho rivodoza, hatreto. Na izany aza, hitondra orana betsaka sy fahamafisan’ny fitsokan’ny rivotra izy ary mbola hahery ihany koa ny ranomasina amin’iny andrefan’ny Nosy iny.
Manodidina ny 50km hatramin’ny 60km isan’ora ny tafiotra entin’ity andian-drahona ity any andrefana sy avaratry ny Nosy iny. Hahatratra telo metatra ny haavon’ny onjan-dranomasina amin’ireo faritra ireo, manomboka eo Analalava hatrany Vatomandry.
Anio tolakandro, tena hikija maharitra ny orana amin’ny faritra maromaro ary hitohy hatramin’ny alina izany. Voakasik’izany ny eto Analamanga, indrindra ny any amin’ny faritra andrefana. Hitohy hatramin’ny rahampitso tontolo izany.
Heverina ny hivoahan’ity andian-drahona ity any amin’ny distrikan’i Brickaville sy Mahanoro iny ka mila miomana amin’izany ireo mponina any satria hisy ny rivotra sy rotsak’orana matevina, ary mitohy maharitra hatramin’ny zoma izao.
Mila mailo sy miomana ireo tsy maintsy hihazo ny lalam-pirenena RN4 sy RN6 amin’ny fahatapahan-dalana sy fiakaran’ny rano. Miomana amin’ny vatsy an-dalana…